ရန်ကုန် ကိုဗစ် အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲမှာ အသုံးပြုမယ့် နည်းဗျူဟာ အပြည့်အစုံ - Zet Star
ရန်ကုန် ကိုဗစ် အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲမှာ အသုံးပြုမယ့် နည်းဗျူဟာ အပြည့်အစုံ
ရန်ကုန်မှာ အခု အကြီးအကျယ်စစ်မယ်ဆိုတဲ့ ဗျူဟာက….
နံပါတ်တစ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားလုံးကို စစ်မယ်…နံပါတ်နှစ် ကိုဗစ်သံသယလူနာအားလုံးကို စစ်မယ်..နံပါတ်သုံး ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ရမယ့်သူအားလုံး(ကလေးမွေးတာ၊ အူအတက်ပေါက်တာ စသည်ဖြင့် ခွဲစိတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ လူနာအားလုံး)၊ နံပါတ်လေး ကိုဗစ်ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ ထိတွေ့တဲသူအားလုံးကို စစ်မှာပါ….
စစ်လိုက်လို့ ပိုးမတွေ့ရင် ကျန်းမာရေး ပညာပေးမယ်..စစ်လိုက်လို့ ပိုးတွေ့ရင် အပိုင်းသုံးပိုင်းပြန်ခွဲမယ်…
နံပါတ်တစ်… ပိုးရှိနေပေမယ့် အနံမရတာမျိုး၊ တခြား ကိုဗစ် လက္ခဏာတွေ မရှိတဲ့သူတွေကို သီးသန့်နေရာတခုကို ပို့ပေးပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမယ်… နံပါတ်နှစ်… ပိုးရှိနေပြီး ကိုဗစ်လက္ခဏာလေး နဲနဲပါးပါးပြနေတဲ့သူတွေကို သူတို့ရောက်နေတဲ့ ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ကိုဗစ်ကုသရေးဌာနတွေကို ပို့ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးပါမယ်….
နံပါတ်သုံး… ပိုးရှိနေပြီး ကိုဗစ်လက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့သူတွေ၊ ကိုဗစ်ပိုးရှိနေပြီး တခြားရောဂါအခံတခုခုရှိနေတဲ့သူတွေကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံ တောင်ဥက္ကလာဆေးရုံ သင်္ကန်းကျွန်း ဆေးရုံ အင်းစိန် ဆေးရုံ ဖောင်ကြီး ဆေးရုံတို့ကို ပိုပြီး အထူးကြပ်မတ်ပြီး ကုသပါမယ်…
dr .Kyaw Thu Ya
← နေ့မြင် ညပျောက် ဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်နှင့် အထူးသတိထားရမယ့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ
ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရှ်စစ်တပ်က သူ့ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး လက်နက်တွေကို မြန်မာနယ်စပ်မှာ နေရာချထားလိုက်ပြီ →